Soo dejisan SugarSync 3.7.3.3 – Vessoft
Soo dejisan SugarSync
SugarSync – software ah in macluumaadka lagu kaydiyo ee kaydinta daruurtii. Software ayaa u saamaxaaya in ay geliyaan files of noocyo kala duwan ama tirada ee kaydinta daruur iyo bixiyaan helitaanka degdeg ah si ay xogta soo bixi qalabka kala duwan. SugarSync kuu ogolaanayaa inaad reserved .Wadashaqayntaas ee fayl adeegga in si toos ah downloads gudbiyo si kaydinta. Software ayaa sidoo kale awood u in la bixiyo guud ahaan ay xogta dadka isticmaala kale ee aragtida dambe ama edit faylasha degsan. SugarSync siinayaa qadar kooban oo boos ku server, laakiin waxaa lagu kordhin karo kharash dheeraad ah.
Xogta Stores in kaydinta daruurtii
.Wadashaqayntaas Automatic ah oo fayl la server
SugarSync Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... Dropbox 12.4.22
العربية, English, Français, Español... HJSplit 3
العربية, English, Français, Español... Modio 5.301
العربية, English, Українська, Français... Free iPod Video Converter 3.0